Na ihu ọma nke iche iche na Linux ma ọ bụ megide? | Site na Linux
Na ihu ọma nke iche iche na Linux ma ọ bụ megide?
mkwado_misssweets | | Ndị ọzọ
Nke a bụ otu n'ime isi ihe ndị a kpọtụrụ aha mgbe ị na-ekwu maka GNU
Agụọla m ebe ahụ ọtụtụ oge: Gịnị ma ọ bụrụ na kama imeri ọtụtụ narị narị distros, ha niile gbalịsiri ike wee mee naanị otu?
Ọ bụ ezigbo echiche iji chee echiche ụwa dịka ọ ga-adị naanị nkesa Linux, ma ọ bụ tụlee kernels ndị ọzọ:
GNU, sistemụ arụmọrụ nke Richard Stallman kere dị na atọ: BSD; Mee ọsọ ọsọ y Linux
Mee ya site na ncha, ụdị nbudata na emerge (nke sitere na Gentoo), ụdị ngwakọta a chịkọtara ma dezie (Sabayon). Precompiled version na scripts, precompiled version na console Wizard, mbipute na graphical ọkachamara.
Họrọ ihe ntinye gị: Ọtụtụ na-egosikwa.
Họrọ nchekwa: Stable Free, Nke na-akwụghị ụgwọ, ọ naghị akwụ ụgwọ, nnwale n'efu, nwalee 2 n'efu, akwụghị ụgwọ n'efu, akwụghị ụgwọ ọfụma, nnwale nnwale, na anaghị akwụ ụgwọ. PUre KDE, GTK2 dị ọcha, GTK dị ọcha, ndị na-abụghị mulitlib, multilib….
Ebe nchekwa onye ọrụ.
Họrọ ụdị mmemme ọ bụla: Student, Server, Gamer ...
Họrọ ihe nkesa ihe osise: Xorg, Wayland, Mir
Họrọ eserese eserese: Gnome, Unity, Mate, Cinnamon, LXDE, XFCE,
Họrọ ụfọdụ nka, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ mint, mmadụ, kilimanjaro, ube na apụl, camaleón verde ...
Họrọ ngwaọrụ gị: Yast, apt-get, iputa, entropy, yaourt, yum, pacman ...
N'ileghachi anya na ya site na ebe ahụ ebe ihe niile bụ otu sistemụ, a ga-enwe ọganiru ọsịsọ n'ihi na usoro nhazi ga-adị doro anya. Na maka onye ọrụ nkịtị na-abanye na peeji nke nke echiche efu ahụ wee chọta ụzọ 20 iji wụnye ya, ọ ga-eche na ọ gaghị enwe ike iji ya.
Na mgbakwunye, ị ga-eche na ịkpa oke maka ndị obodo ga-enwe nsogbu na klaasị. Ihe yiri nke ahụ nwere ike ime ugbu a, mana yana sistemụ dị iche. Mata na gị distro.
Na mgbakwunye, Bill Gates ga-abata wee malite ịgba akwụkwọ, patent maka bọtịnụ apụ, patents maka enwe, patent maka taskbar.
Ọ ga - ebido iji ego ya wepụ ndị dị mkpa na Linux ma mee ha ụlọ ọrụ ya. Projects ga-amalite na-anwụ. Maka na otu ha niile na-ebu ya ugbu a.
Ọtụtụ ndị ọzọ agaghị achọ ido onwe ha n'okpuru ọtụtụ mmadụ ma nwekwuo nnwere onwe, ha ga-ahapụ Linux ... Ọ ga - amalite ibibi usoro a haziri ahazi.
Echiche nke otu usoro dị m ka ọ kacha mma, mana ọ bụ nnukwu utopia. Agaghị enwe nnwere onwe maka Linux ịdị ka nke a. Nnwere onwe enweghị oke njedebe na ọnụọgụ nke nkesa Linux bụ ezigbo ihe atụ nke imekọ ihe ọnụ na nnwere onwe nye ụwa.
Ọzọkwa 50 distros ndị mbụ yiri ka ọ dị m mma. Ọ masịrị m na GNU / Linux a ghọtara ndị mmadụ maka ụzọ ha si eche echiche ọ bụghị dịka ndị na-azụ ngwaahịa ngwaahịa nwere ike imeghari. Ikekwe ụfọdụ na-ahọrọ ime mgbanwe maka ihe ha na-enye iwu.
Echiche gị ga-adọrọ mmasị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ndị ọzọ » Na ihu ọma nke iche iche na Linux ma ọ bụ megide?
xDD Gini mere anyi ji na-ata oldta Bill ochie maka ihe niile? Bill anaghịzi elekọta Microsoft, ọ na-ekpori ndụ nde ya ma na-arụ ọrụ ebere iji kwụọ ụtụ isi.
N'ihe dị iche iche, ọ dị mma na enwere nhọrọ mgbe niile. Dịka ọmụmaatụ, m ga-enwe obi ụtọ ma ọ bụrụ na otu usoro ngwugwu ahụ jikọrọ ọnụ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, Debian na-eji dpkg na apt, RedHat jiri rpm, Suse na-eji zipa ma ọ bụ yast ... nke ọma, nke ahụ adịghị njọ, mana ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na enwere otu ihe maka ha niile, ebe ọ na-enweghị ihe ọ bụla distro ọ bụ, arụnyere na voila, na-enweghị ikpokọta ihe ọ bụla. Ùkwù? Echeghị m otu ahụ, mana ihe yiri ya.
Banyere ọnụ ụzọ ego .., ihe na-eme bụ na nwunye ya bụ onye kwere ekwe na ha na-ekwu okwu ọjọọ nke ọ manyere ya ịrụ ọrụ ebere XD
Ọ bụ akara ngosi.
Ọ dị mfe iji anya nke uche hụ ndapụta ahụ na onye ị maara karịa ụlọ ọrụ.
Enwere chaị! - Banyere onye ọrụ m -, ana m eji Manjaro, ebe m na-eji ọtụtụ distros, m na-eji njikọ atụ na folda chromium, n'ihi na m na-eji Chrome otu bụ akụkọ ọzọ. Opekempe Arch bụ ọkacha mmasị m.
Otu usoro ngwungwu niile distros agaghị arụ ọrụ. Linux distros dị nnọọ iche na ibe ha, na ịnwe otu ụdị maka ịwụnye nchịkọta anaghị ekwe nkwa ndakọrịta ma ọlị. Nchịkọta ndị ahụ na-etinye faịlụ na ebe dị iche iche dabere na distro, ha na-edekwa ederede ederede pre / post maka distro ọ bụla. Ukwuu na-atụ aro na-agụ na okwu a:
Kọwaa pisha dijo
Debian / Ubuntus jiri dpkg na SuSE / OpenSuSE, Ferdora / RedHat / CentOS / SCL, jiri rpm
Debian / Ubuntus jiri apt na SuSE / OpenSuSE zypper na Fedora / RedHat / CentOS / SCL yum na Rosa / Mageia / Drades urpmi
nakwa na ọ bụrụ na ị jiri KDE ị nwere ike iji eserese Muon ma ọ bụ Apper ma ọ bụrụ na ị jiri ihe GTK Synaptic na Debian / Ubuntus, wdg ...
Na nkenke, zypper na-eji otu rpm dị ka urpmi, yum, smart, wdg. Ọzọkwa, ụfọdụ n'ime ngwaọrụ ndị a nwere ike iji rpm na deb na vice versa.
Zaghachi iji dokwuo anya pisha
Ogbodo 1993 dijo
Di iche iche nke Linux distros bu ihe okike, ya na komputa di obi ala na oke ego maka OSX ma obu ihe di oke onu ahia nke n’enweghi ihe obula nke i gha agha na Bronx dijitalụ iji nweta ihe omume n’efu maka Windows
XD dijitalụ Bronx bụ eziokwu. Amaghị m ihe kpatara ya, mana enwere ọtụtụ ndị ọrụ Windows nwere ibu ọrụ maka ịchụpụ ihe niile, nwee mmemme na-akwụghị ụgwọ na-eme otu ihe ahụ.
imaatu, Windows ...
Ezigbo echiche, na iche iche dị na Linux abụghị nsogbu, gịnị ma ọ bụrụ na Linux kwesịrị ịnwe bụ ụkpụrụ akọwapụtara dịka nkwakọ ngwaahịa na otu usoro nke ahụ bụ otu maka distros niile (n'oge a ụfọdụ nwere ike ma ọ bụ ghara ikwenye).
Ihe nkesa ihe osise, wdg.
M na-emeghachi akụkụ ụfọdụ, ma ọ bụghị na ahụghị m nsogbu.
Zaghachi nye Curefox
Kpọmkwem, ihe dị ka nke a ka m ga-ekwu, ihe nkesa eserese bụ akụkụ dị oke mkpa ma nwee nkwenye nke obodo niile, mana ị hụrụ ihe ha mere anyị. Amaara m na enwere ndị kwenyere na njem a na ha ga-enwe ihe kpatara ha, nke ọma ma ọ bụ nke ọjọọ, n'onwe m, m nwere olile anya na okwu a anaghị agabiga ma ghọrọ anyị ezigbo nsogbu.
Nke a bụ Juanr, mezie akụkụ kachasị mkpa ma dị oke egwu dịka ị kwuru, nke ahụ bụ ihe ha kwesịrị ime, kama ị na-ewere ndụdụ maka ihe niile.
Ha ka ha chikota>.
Chịkọta ọbụla na - enye gị ọtụtụ iche iche ka okwu a ghara ịba uru ... xD
Nke ahụ bụ ajụjụ. Ọ bụghị na anyị niile na-aga site na otu mgbanaka (otu mgbanaka) ma ọ bụ na, dịka ugbu a, nkesa mmiri na-elekwasị anya n'ịzụlite nzaghachi yiri nke ahụ, nke bụ ihe efu. Isi okwu a bụ na GNU / Linux enwere nkwekọrita dị nkenke, ma ọ bụrụ na ọ bụghị n'akụkụ niile ma ọ dịkarịa ala n'akụkụ ụfọdụ nkesa nke otu "ezinụlọ" ahụ.
Ndi Mandrake na Conectiva esonyeghi na mbido n’oge gara aga?
Ndewo, n’uche m, ụdị dị iche iche bụ, otu n’ime isi okwu nke Linux nwere, na-akwado sistemụ ndị ọzọ, agbanyeghị na mgbe ụfọdụ enwere okwu gbasara nkewa na ọ bụghị iche iche. mana okwu m bụ na iche iche na-enyere onye ọ bụla aka ịhọrọ sistemụ arụmọrụ ha dịka mkpa ha si dị. Ọpụ. Ahụrụ m Archlinux n'anya, mana ọ bụrụ na ọ bụ naanị sistemụ ọ bụ onye enyi ya na-amalite na Linux, ọ tụbara kọmpụta ahụ n'isi m, mana ọ nwere ihu ọma enwere distro ndị ọzọ dịka linux, mint, fedora ndị dị mfe .
kpam kpam na-akwado iche iche. Ọtụtụ distros, ọtụtụ nchịkọta ụlọ ọrụ, ọtụtụ ihe niile. Nnwere onwe dị iche iche, ọ jọgburu onwe ya, enweghị nchekasị, nkụda mmụọ, iche iche, naanị ihe. Ọ bụrụ na ọ bụ naanị otu distro na mgbe ahụ ọ gaghị abụ GNU.
Na m na-enye gị ihe kpatara ya. Kedu ihe ọzọ, ihe kachasị amasị m banyere GNU / Linux bụ na ị nwere ike ịhụ na ntụgharị ọ bụla nwere ụdị nke ya.
Ndewo, na nhọrọ m, iche iche bụ otu, otu isi ihe dị na Linux nwere, na-akwado sistemụ ndị ọzọ, ọ bụ ezie na mgbe ụfọdụ enwere nsogbu nke fractionation na ọ bụghị iche iche. Mana okwu m bụ na iche iche na-enyere onye ọ bụla aka ịhọrọ sistemụ arụmọrụ ha dịka mkpa ha si dị. Ọpụ. M hụrụ arch Linux n'anya. Mana ọ bụrụ na ọ bụ naanị ya bụ enyi ya nke na-amalite na Linux, kọmputa ahụ tụbara m n'isi m, mana ọ nwere ihu ọma na enwere distro ndị ọzọ dị ka linux, mint, fedora ndị dị ezigbo mma mana gbakwasara ụdị ọzọ nke onye ọrụ nke ka ọ dị mfe ma ọ bụ ka ọ dịkwuo irè, ma ọ bụ ndị ọzọ nọ ebe ahụ ma ọ bụrụ na njiko a ga-ahazi karịa ma ọ bụ gentoo, ha kwesịrị ebe ọ bụ na ha nwere ihe ndị ọzọ masịrị ha. ngbasa iji meziwanye onwe ha.nke evolushọn na-eme ka ebe kacha mma na ebe dị iche iche .PD: ndo maka mmejọ ahụ
Di iche iche bu ihe di nma, echiche nke na oburu na mgbali nile gara n’otu distro di nma ma o bughi na iru ya, chee na otutu ndi nwere mmasi di iche na ikike di iche iche na aru oru na UNICA distro, ogabu ogba aghara.
Nye nwere ike ịtụ? Kedu onye ga - ekpebi ihe a ga - eji oge m ezumike mee?
Free na-emeghe iyi software n'ozuzu bụ a nnọọ mgbagwoju usoro, ihe dị ka mkpụrụ ndụ ihe nketa mutations, ọbụna okpu oru ndị dị mkpa n'ihi na ndị ọzọ na-amụta ihe na-adịghị arụ ọrụ na ihe na-eme, ma si otú ahụ entropy na-kere n'etiti niile oru na enhances nkịtị mmepe.
Charlie-agba aja aja dijo
Ọ dabere na ihe ọ bụ. Enweghị m nsogbu na ihe dịka gburugburu desktọọpụ ma ọ bụ nwee ọtụtụ ndị egwu egwu. Mana ihe nkesa eserese yiri ka ọ dị m njọ. Echere m na ọ bụ otu n'ime ihe kachasị njọ Canonical mere maka linux
Uche m dị ka ndị ọrụ ibe ndị ọzọ, na ụdị dị iche iche dị mma ruo n'ókè. Ihe ụfọdụ kwesiri ịhazi ma anyị niile ga - emeri, ihe na - eme bụ na o siri ike ikwenye na ọtụtụ ndị na - arụ ọrụ maka ntụrụndụ.
Ka anyi gbalịa ka anyi ghara imebiga ihe ókè. Echere m na n'ụzọ a ọ ga-adịrị mfe maka ihe niile iji nwee ọganihu.
Gịnị bụ nnukwu nsogbu?
Di iche iche ma obu obughi iche?
Discrimkpa oke akpa oke ma ọ bụ ịkpa oke?
Nwa ka oji?
Ma gịnị kpatara adịghị mma egwurugwu?
Ntụle dị mma na agba ndị agbakwunyere.
Ekwenyere m na inwe egwurugwu ịhọrọ agba nke masịrị m bụ nke kachasị mma, mana echere m na enwere ụfọdụ ihe akọwapụtara nke ndị niile ghọtara ga-ahọrọ agba nke ka mma ka ọ dịrị mfe ịga n’ihu. Iji maa atụ, cheedị ụwa ebe World Wide Web abụghị ọkọlọtọ ma anyị ga-ahọrọ n'etiti internets dị iche iche (nke a ga-ahọrọ n'eziokwu ebe enwere netwọọkụ Tor, FreeNet, wdg).
N'agbanyeghị nke ahụ, ọ dị mma na enwere ụkpụrụ, na nke ọ bụla gafere ụkpụrụ ahụ ozugbo ha nwere ihe ọmụma dị mkpa ebe ọ bụ na ịhọrọ nnwere onwe, onye ga-amarịrị nke ọtụtụ ihe a mụtara site na iji.
Agbanyeghị, na Linux ilekota na-aga n'ihu ya, nke maka oge ahụ dị m mma.
Enwere m nkwado maka ịgbanye nhọrọ, mana taa ihe enwere ịla n'iyi. Distros n'aka ekpe na aka nri nke na-agbakwunye ihe ohuru (ọ na-eweta ElementaryOS karịa ọtụtụ nke distros ndị ọzọ Ubuntu gbakọtara).
Maka nke ahụ, ọ masịrị m na matriks distros dị ka Debian, RHEL / CentOS na Slackware karịa, ebe ha bụ ndị lagoro ezumike nka na ọ bụ ha na-enye aka na mbara igwe GNU / Linux.
Ha ga na-awakpo Bill Gates ọgụ mgbe niile n'ihi na ọ bụ ya bụ onye mbụ mesoro sọftụwia dị ka a ga-asị na ọ bụ ihe anụ ahụ, dịka ihe, dị ka ihe gbara ọkpụrụkpụ na kọmputa. Ọzọkwa, a na-ahụta ya dịka John D. Rockefeller nke "ụlọ ọrụ" ngwanrọ ahụ.
Banyere ọrụ, ha malitere imepụta akụrụngwa, Bill Gates bụ onye wepụtara echiche nke ịba uru site na nchịkọta ya kama ịkekọrịta ya dị ka ọtụtụ ndị mere n'oge ya.
Ndoo maka okwu gara aga ọ bụrụ na ọ bụ isiokwu.
Di iche iche di oke onu. Nsogbu bụ na e nwere ezigbo ịkwa iko nke na-akpata ọgba aghara nke na-eme ka ọ bụrụ otu (dịka ọ dị na Canaima na Huaira distros, nke na-enyeghị ihe ọhụụ).
Banyere matrik distros dị ka RHEL / CentOS, Debian na Slackware, ha nwere uru na ọghọm ha, mana ha bụ nhọrọ dị mma maka ndị mbido dịka Fico kwuru na mbụ banyere ọkwa ya na Linux, ịdaba na distro-hopping.
Onwe m, ekwenyere m na ọ gaghị ekwe omume ịbelata ihe dị iche iche nke sọftụwia na-enye n'efu na-enyeghị mmachi ụfọdụ ụfọdụ nnwere onwe anọ dị na ya. Nkwubi okwu m bu na ihe di nma otu ha di, dika ihe Darwin kwuru banyere ihe ekere eke.
Echere m na nhọrọ eke bụ ezigbo ihe atụ. A na-amụ Distros, na-eto, na-agbanwe, na-emepụtaghachi ... Ndị na-adịghị enye aka ihe ọ bụla ma ọ bụ na-adịghị emegharị ma ọ bụ nwee akara ngosi jọrọ njọ ga-anwụ, yabụ usoro ndụ na-aga n'ihu. Ọ bụrụ na e nwere ọtụtụ distros, ọ bụ n'ihi na ndị mmadụ chọrọ ya n'ụzọ ahụ, nke ọ bụla nwere echiche nke ya na otu esi eme ihe. Aghọtaghị m ọtụtụ ihe mana enwere ihe ndị nkịtị, nri? kernel ma ọ bụ ihe yiri nke ahụ (nke ndị na-achịkwa esemokwu a kọwara) ma ọ bụrụ na ha agaghị akwụsị ịbụ GNU / Linux ma bụrụ OS ọzọ. Echeghị m na ihe niile nwere ike ịdị n'otu, ndị ọrụ Linux mere ya Linux ma nwee ọtụtụ echiche dị ka ndị mmadụ ma ọ bụrụ na anyị niile maara etu esi eme ya, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu distro maka onye ọrụ ọ bụla.
Zaghachi ka blonfu
JE JE JE, n'ihi na ị na-anọnyere naanị WINDOWS and .. Adịghị MỌDE Biko.
Ekwenyere m na ụdị dị iche iche dị mma, mana ihe na - eme taa karịrị akarị, echere m na ihe dịka nkesa 10 dị iche iche n'etiti ha ọ bụ karịa ihe zuru oke wee lekwasị anya mbọ niile iji meziwanye ihe ndị a ma ọ bụ nke ị nwere ike ibudata site na oge mbụ à la carte, ka m kọwaa, ọ ga-abụ oke nkesa nke tupu ibudata ya ị nwere ike ịhọrọ sọftụwia niile ọ ga - enwe, nke na - ahọrọ otu gburugburu ma ọ bụ ọzọ, nke na - ahọrọ sọftụwia na - akwụghị ụgwọ ma ọ bụ nke ọzọ, bụ na ịchọrọ ihe nchọgharị ma ọ bụ nke ọzọ, ma achọrọ m onye editọ vidiyo na ma ịhọrọ nke ...
Nke ahụ ga-adị mma, mana ihe dị mkpa bụ ịnye onyonyo nke ịdị n'otu ka nkwado wee bawanye, nke na-agaghị afụ ụfụ.
Na nkenke, na echiche ọ bụla ị nwere, ọ bụrụ na ntakịrị nzukọ dị mkpa ma ọ bụrụ na mgbe nke ahụ gasịrị, a na-arụ ọrụ nkwonkwo yiri ya ọ ga-adị mma.
Nnọọ ! Ekele mmadụ niile! Naanị isiokwu m nọ na-atụgharị uche na ya-
Katidral na Bazaar, ọ́ bụghị ya? Eric S. Raymond
Zaghachi ka ndi otu ndi agha
Bill Gates? Echeghị m na nke ahụ ga-eme, na nwoke ahụ zuru Apple ihe niile, ọ nweghị ike patent ihe ọ bụla.
Site n'ụzọ, Echere m na ụdị dị iche iche dị mma, ka emechara, enwere ezigbo ezigbo disros, ndị ọzọ bụ naanị ndụdụ nke ndị ọzọ, nke na-agbakwunye ma ọ bụ buru ihe ole na ole. Ọ bụrụ na ndị mmadụ na-eburu nke ahụ n'uche, a gaghị enwe nsogbu ọ bụla, ebe ọ bụ na anyị niile na-achọ ihe dị iche, dịka ọmụmaatụ m na-achọ ịhazi oge na ndị ọzọ na-ahọrọ ịghara ịhapụ ịkwụsi ike.
Ka anyi kwuo otutu distros na enwere, 20, ma eleghi anya, ndi ozo bu ndi mbu ma ndi mmadu ndi mmadu kachasi tufuo ha ngwa ngwa, site na Ubuntu. Ọ bụ ezie na, ọ bụ eziokwu na ọ bụ ihe mgbagwoju anya na maka ndị na-achọkarị ịmata ihe, ndị na-achọ ịnwale, ọ na-ewe iwe. Agara m, ma ị fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ị na-ejedebe ebe ị malitere
Di iche iche dị mma n'ihi na ọ na-ejedebe monopolies, ebe ọ bụ na enwere ọtụtụ nhọrọ, ị nwere ike ịbanye na nke kachasị gị mma. Mana enwere nsogbu nke bụ na mgbe enwere ọtụtụ iche iche, ọgụgụ isi na-agbada na mmiri. Enwere ọtụtụ ndị na-anwa "ime" ma ọ bụrụ na ha sonyeere anyị, anyị ga-enwe ọnụ ọgụgụ buru ibu nke mmemme anaghị akwụ ụgwọ ọ bụla ma anyị agaghị enwe nsogbu anyị nwere. Anyi choro "nkpanye ihe nkpuchi di mfe". Otutu ndi enyi m gwara m na "iwunye Linux siri ike nkewa nkebi na-atu ha egwu." Ọ bụghị mmadụ niile dị njikere ịmụ ma chọọ ntanetị maka nkuzi ha chọrọ (dịka m mere, na n'ezie ọtụtụ n'ime gị), a na-eji ha "ee" "esote" "Ana m anabata"…. nke sistemụ ahụ nke m achọghị ikwu ma ọ bụ cheta. Agaghị m agbanye ya ọzọ. ekele m all-ace.
HD Magazin # 8 dị